विशेष – Page3– Banking Khabar
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु : कुनले कमायो कति नाफा ?
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय स्तरका ११ वटै विकास बैंकले आफ्नो गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । जसअनुसार, देवः विकास बैंकबाहेक सबैको खुद नाफा बढेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहेको छ भने सबैभन्दा कम …
विकट जिल्ला बाजुरामा पनि हजारौँ उद्यमी जन्माउँदै लघुवित्त
रेखा चन्द/बैंकिङ खबर । जिल्लागत आधारमा हेर्दा, प्रायः जसोमा कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छन् । तर, जिल्लाका अलि सुगम स्थान छानेर बैंकहरु स्थापित भएका छन् । यसले गर्दा, अझै पनि विपन्न वर्गकाका मानिसहरु वित्तीय पहुँचमा समेटिन …
बैंकहरुलाई वित्तीय विबरण छिटो सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई साता वितिसक्दा पनि बैंकहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशित नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्रमा विवरण सार्वजनिक गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । त्रैमास महिना सकिएको १५ दिनभित्रमा कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा …
बीमा पहुँच विस्तारमा नेतृत्वकर्ताका टिप्सहरु
बैंकिङ खबर । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा गाउँ गाउँसम्म विस्तार गर्न नसक्दा बीमा व्यवसाय सोचअनुरुप फस्टाउन सकेको छैन । बीमा कम्पनीको संख्या त बढिरहेको छ तर, सबै सहरमा मात्रै छन् । एक त पहुँच नै छैन, त्यसमाथि, बीमा शिक्षाको पनि …
कार्तिकसम्म नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सबै प्रक्रिया पूरा हुने
बैंकिङ खबर । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड संचालनको प्रक्रिया तीव्र गतिमा भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको बैंकले कार्तिकभित्र आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने हिसाबले काम गरिरहेको इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत …
बैंकहरुमा हेल्पडेक्सको अभाब : सर्वसाधारणलाई सास्ती
बैंकिङ खबर । एकातर्फ दिनानुदिन विभिन्न बैंकका शाखा विस्तारित भइरहँदा अर्कोतर्फ आम सर्वसाधारणले बैंकिङ सुविधा पाउनु त कहाँ हो कहाँ सास्ती पाईरहेका छन् । कतिपय बैंकहरुमा अहिलेसम्म हेल्पडेक्सको अभाब वा कमि रहेको छ । बैंकहरुले यस्ता कुरामा ध्यान नदिएको पाईन्छ …
जुम्लामा दैनिक १० हजार कमाउँछिन् धुम्बु : सफलताको अनुकरणीय कथा
रेखा चन्द/बैंकिङ खबर । हातमा न सिप न तालिम केही थिएन । पुरानो परम्परा थियो । छोरी मान्छेलाई स्कुल पठाएर पढाउनु पर्छ भन्ने धारणा न त घरमा नै थियो न त समाजमा नै । शिक्षा लिनु त कहाँ हो कहाँ …
खराब कर्जा बढेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरण गुहार्दै बैंकहरु
बैंकिङ खबर । बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जा उठाउन नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई गुहार्न थालेका छन् । आफुले लगानी गरेको ऋणीले ऋण नतिरेपछि कर्जा उठाउनको लागि न्यायाधिकरणमा बैंकहरुले मुद्धा दायरा गरेका हुन् । क, ख र ग वर्गका बैंकहरुले ऋण उठाइदिनको …
मौद्रिक नीतिमा माईक्रोफाइनान्सको टिप्पणी : ‘फण्डको व्यवस्थामा पुर्नविचार गरियोस्’
बैंकिङ खबर । नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिको समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एसोसिएसनका महासचिब समेत रहेका विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालले एसोसिएसनले उठाएका अधिकांश मागहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको बताए । विशेषगरी माइक्रोफाइनन्सहरुले दुई वटा …
बैंकर्सको टिप्पणी – ‘समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो’
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर, तरलता, लघुवित्तको स्रोत लगायतका समस्याको सम्बोधन भएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले मौद्रिक नीतिबारे फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । बैंकिङ …
नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक : मूख्य विशेषताहरु (१४ बुँदामा)
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५।७६को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालद्धारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा गरिएका मूख्य व्यवस्थाहरु बुँदागत रुपमा यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ : व्याजदर करिडोर व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा …
लघुवित्तको सहायतापछि गाउँमै दैनिक २० हजार आम्दानी
निर्जला खड्का/बैंकिङ खबर । शिक्षा पनि थोरै थियो । तालिम पनि केही थिएन । आँट र भरोसा दिने आफन्त समेत कोही थिएनन् । तर पनि बाजुराको बढिमालिका नगरपालिका १, जुगाडास्थित सल्लेनाकी लालीदेवी कार्कीले हार मानिनन् । उनको विवाह सानै उमेरमा …
सूचना लुकाउन माहिर ‘स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक’
बैंकिङ खबर । स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाल राष्ट्र बैंककै मातहतमा संचालित क वर्गको बैंक हो । अधिकतम विदेशी लगानीमा स्थापित यो बैंक विभिन्न कारणले आलोचित भइरहेको छ । विशेषतः सूचना लुकाउने कुरामा यो बैंक माहिर छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालन …
बैंकको व्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने, सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने
बैंकिङ खबर / अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बैंकको व्याजदर खुल्ला बजारले निर्धारण गर्ने भन्दै व्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने बताएका छन् । शनिबार नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभा सम्द्घाटनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले ब्याजदर बजारले तोक्ने र त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकिने बताए …
कालिकोटमा हजारौँ उद्यमी जन्माउँदै लघुवित्त
रेखा चन्द/बैंकिङ खबर । अतिविकट भनिएको कालिकोट जिल्लामा बैंकिङ पहुँचको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको छ । ठूलो बैंकको त कुरै छोडौँ, लघुवित्तहरु समेत निकै कम संख्यामा पुगेका छन् । किसान माइक्रोफाइनान्सको रासकोट शाखाका प्रबन्धक गणेश कुमार शाहीका अनुसार, कालीकोटमा लघुवित्त …